FSX umbono we-addon
Umbuzo FSX umbono we-addon
unyaka 1 9 edlule #920 by I-NitroUK
Ngangizibuza ukuthi ngabe kukhona umuntu owaziyo nge-addon enganginika umphumela wokukhanyisa kwi-pointer yami yegundane ukuze kuthi lapho ubusuku bayo kanye nendiza yami iCold and Dark ngiyabona ukushintshwa engikudingayo ukuvula ukuze kuqalwe indiza / ukukhanya ...
Ingabe kukhona okufana nalokhu okwamanje? ingabe ingenziwa ngumuntu? id ukukhokhela ngenjabulo i-addon.
Izifiso ezinhle Glenn - G-VODC
"I-Blue Skies ... I-Flying Safe"
unyaka 1 9 edlule - unyaka 1 9 edlule #930 by DRCW
Hhayi, angizange ngincoma lokhu ngoba lapho ihlezi, isikhombisi segundane sizothola eceleni i-FPS, ukufaka isici esinjalo singenza umonakalo omkhulu ngaleyo ndlela. Ukubheja okuphambili ukusebenzisa ukukhanya kwezikhukhula zamaplanethi ngenkathi kuqhutshwa indiza. Qinisekisa ukuthi usebenze u-APU (i-Aux Power Unit) ngezindiza ezihlomele kahle.